तपाईलाई थाहा छ, यस्ता छन् बिहान चाँडै उठ्दा हुने फइदा | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ, यस्ता छन् बिहान चाँडै उठ्दा हुने फइदा
बिहान चाँडै उठ्नु निकै कठिन काम लाग्दछ । तर, तपाई चुस्तदुरुस्त रहन चाहनु हुन्छ भने बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नु राम्रो हुनेछ ।
एक अध्ययनका अनुसार बिहान चाँडै उठ्नेहरुको बुद्धि बिहान ढिला उठ्नेहरुको तुलनामा तेज हुने गर्दछ । बिहान चाँडै उठ्ने र हल्का ब्यायम गर्दा तपाई शारीरिक र मानसिक रुपमा फिट रहनु हुन्छ ।
यदि तपाई बिहान चाँडै उठ्ने गर्नु हुन्छ भने तपाईको पूरै दिनचर्या सही र समयमा हुने गर्दछ । यसबाट तपाईको दिमाग तेज हुन्छ र काम गरेपछि पनि तपाईलाई थकानको अनुभूति हुने छैन । यसबाहेक पनि बिहान चाँडै उठ्दा निम्न कुराहरुमा लाभ प्राप्त हुने गर्दछ–
–ब्रम्ह मुहूर्तमा उठ्दा मानिसको दिनचर्या नियमित हुन्छ । उसले व्यायम, स्नान, भोजन वा आरामका लागि पर्याप्त समय निकाल्न सक्दछ । सुर्योदयभन्दा करिब डेढ घण्टा पूर्वको समयलार्य ब्रम्हमुहूर्त भन्ने गरिन्छ ।
यो समयमा व्यायम, मर्निङ वाक, जंगिङ, स्वीमिङ आदिका लागि समय निकाल्नुस् । ताजा हावा, घाम र प्राकृतिक माहोल महशुस गर्नुस् । यो सबै गर्दा तपाईभित्र ऊर्जा प्राप्त हुनेछ, जसबाट तपाईको शारीरिक र मानसिक विकास राम्रोसँग हुने गर्दछ ।
–बिहान चाँडै उठ्दा तपाईले दिउँसो आराम गर्ने समय पनि पाउनु हुनेछ । जुन तपाई आफ्नो परिवारजन वा मित्रहरुका साथ बिताउन सक्नु हुन्छ । त्यति मात्र होइन, तपाई गार्डनिङ पनि गर्न सक्नु हुन्छ, साथै तपाई त्यो काम गर्नुस् जुन तपाईको रुचीमा पर्दछ । त्यसबाट तपाई दिनभर तनावमुक्त रहनुहुनेछ ।
–पत्रिका पढ्नुस, अनलाइन समाचार पढ्नुस वा टेलिभिजनमा समाचार हेर्नुस र थाहा पाउनुस् संसारमा के भइरहेको छ। तपाई जुनसुकै पेसामा भए पनि इन्फरमेटिभ हुँदा अरुभन्दा अलग र अगाडि देखिनु हुनेछ ।
–आफ्नै पूरा दिनको चेकलिस्ट बनाउनुस् । जसमा तपाई दिनभरमा के के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो लेख्नुस् । यसबाट तपाईलाई आफ्नो दिनभरको प्लान मात्र होइन, कुनै जरुरी कुरा याद राख्न पनि सहयोग पुग्नेछ । एजेन्सी
Previous post: शिक्षकले समय नदिँदा सिकाई उपलब्धिमा सामुदायिक बिद्यालय कमजोर
Next post: होस् गर्नुहोस :यी पाँच प्रकारका व्यक्तिसँग कहिल्यै साथी नबन्नुस्, नत्र दु:ख पाउनुहोला
यस्ता खानेकुराले दिमाग बनाउँछ चुस्त र तेज
के तपाईलाई थाहा छ ? सेक्ससँग सम्बन्धित यी रोचक तथ्यहरु
आँखाअगाडि अँधेरो छाउँछ वा रिङ्गटा लाग्छ ? ध्यान दिनुस्, यस्तो समस्या हुन सक्छ
मस्त हाँस्नुस्, स्वस्थ रहनुस्, यस्ता छन् हाँस्दाका ११ फाइदा